ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် ဆီးချိုရှိခြင်း – Healthy Life Journal
By Prof. Than Than Aye
Posted on ဧပွီ 5, 2018
မေး. ကိုယ်ဝန်ရှိချိန်မှာ ဆီးချိုရှိနေတာ .. ဆရာဝန်က ဆီးချိုဆေးတွေပေးတော့ သောက်ရတယ်၊ အဲ့ဒါ ခေါင်းမူးပြီး မထနိုင်ဘူး။ ဆက်သောက်ရမလား။ မသောက်ဘဲနေလို့ကော ရနိုင်ပါသလား။
ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။
ဖြေ. ကိုယ်ဝန်ရှိချိန်မှာ လုံးဝမပေါ့ပါနဲ့။ ကလေးရဲ့ ခန္ဓာတည်ဆောက်ရေးမှာ တစ်ခုခုမှားသွားရင် တစ်သက်လုံး လူစဉ်မမီတဲ့ကလေးရနိုင်ပါတယ်။ မက်ဖော်မင်ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်မှာသုံးနိုင်ပေမယ့် အကောင်းဆုံးကုထုံးက အင်ဆူလင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သွေးချိုမထိန်းနိုင်ရင် အင်ဆူလင်အမြန်ဆုံးပြောင်းပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်မှာ လျှော့ချရမယ့် သွေးချိုနှုန်းက သာမန်လူတွေထက်နိမ့်ရပါမယ်။ အထူးသတိပြုဖို့ လိုပါတယ်။
Related Items:Diabetes, Pregnancy
နံနက်စာမစားမီ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းက အမျိုးအစား(၂) ဆီးချိုရောဂါဖြစ်နှုန်း လျော့ကျစေနိုင်
ဆီးချိုရောဂါမဖြစ်မီ ပထမ၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ကြ